XOG: Kaddib Dhamaadka Musalsalkii Taxanaha Ahaa Ee Ronaldo Iyo Messi, Waa Kuwee 6-da Ciyaartoy Ee Sannadka Dambe Ku Tartami Kara Ballon D’Or | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
XOG: Kaddib Dhamaadka Musalsalkii Taxanaha Ahaa Ee Ronaldo Iyo Messi, Waa Kuwee 6-da Ciyaartoy Ee Sannadka Dambe Ku Tartami Kara Ballon D’Or
(05-12-2018) Luka Modric ayaa xalay soo afjaray musalsalkii taxanaha ahaa ee tobanka sannadood socday ee ay jileyaasha ka ahaayeen Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, kuwaas oo dunida qabsaday intii ka dambaysay sannadkii 2007 oo ah waqtigii uu ciyaartoygii ugu dambeeyey ee aan labadooda ahayn ku guuleysto abaalmarinta xiddiga adduunka ee Ballon d’Or.
Sannadkii 2007, halyeygii reer Brazil ee Kaka ayaa hantiyey xiddiga adduunka, laakiin waxa garbihiisa taagnaa Lionel Messi iyo ninka ay is eryanayaan, balse xiddiga reer Argentine ayaa markii ugu horreysay tan iyo 2006 ka maqnaaday liiska saddexda ciyaartoy ee ugu wanaagsan, isagoo kaalinta shanaad galay.
12-kii bilood ee ugu dambeeyey, labadooduba, Ronaldo iyo Messi, waxay sameeyeen bandhig cajiib ah oo ay ku guuleysteen Koobab badan, balse waxa isbaaro u dhigtaay Luka Modric oo ka urursaday dhamaan abaalmarinihii shaqsiga ahaa ee bandhigga la xidhiidhay oo aanay ku jirin kuwa lagu bixiyo gool-dhalintu.
Guusha Modric, waxay fasax siisay Ronaldo iyo Messi oo musalsalkoodii dhamaaday amaba ugu yaraan uu fasax kooban oo sannad ah galay, laakiin xili ciyaareedkan socda ayaa waxa soo bixi kara laacibiin kale oo isbaaro dhigan kara sida Modric oo kale, kuwaas oo jidka abaalmarinta ka xidhi kara Messi-Ronaldo.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa lix ciyaartoy oo dhamaadka sannadka dambe Luka Modric kala wareegi doona abaal-marinta isla markaana boodhka ku qasi doona Messi iyo Ronaldo.
Inkasta oo kaalinta 12aad uu xalay ku dhamaystay, haddana way adag tahay in murashaxiinta xiddiga adduunka laga saaro magaciisa.
Marka laga yimaaddo Ronaldo iyo Messi waxa uu ahaa laacibka loo saadaalinayey inuu ka beddelo fagaareyaasha, taasina waxay sare usii kacday markii uu noqday ciyaartoyga dunida ugu qaalisan ee uu PSG tegay, balse waxa uu la kulmay caqabad ah in horyaalka Ligue 1 oo ka hooseeya tartamada kale uu kusoo geli waayo qiimaynta sare.
Haddii kooxdiisa PSG ay ku guuleysato Champions League, dalkiisa Brazil na ka caawiyo inay qaadaan tartanka Copa America isla markaana uu sii ahaado hoggaamiyaha naadiga ee haddaba uu ka boobay Edinson Cavani, waxa uu noqon karaa laacibka bisha December ee sannadka dambe magaalada Paris lagu guddoonsiiyo Ballon d’Or.
Kaalinta labaad ayuu xalay ku dhamaystay, waxaana ka horreeyey Luka Modric oo kaliya. Xulka qaranka Faransiiska ayaa uu ku hoggaamiyey guul ay sugayeen tan iyo sannadkii 1998 oo ah muddo labaatan sannadood laga joogo, kuwaas oo uu u qaaday Koobka Adduunka, laakiin kooxdiisa Atletico Madrid ayuu sidoo kale u qaaday Europa League.
Haddii sannadkan ay kooxdiisa Atletico Madrid ku guuleysato tartanka LaLiga, isla markaana uu tago finalka Champions League amaba ay ku guuleystaan, way adag tahay inuu jiro ciyaartoy kale oo ku cidhiidhya Ballon d’Or.
Manchester City ayaan weli dhinaceeda dhulka la dhigin horyaalka Premier League oo xili ciyaareedkii horena farqigii ugu weynaa ay ku qaadeen. Kevin de Bruyne ayaa ahaa hoggaamiyaha iyo halyeyga yeedhiya kubbadda quruxda badan ee City, laakiin markii uu dhaawacmay, waxa masuuliyaddu ku wareegtay Raheem Sterling oo xili ciyaareedkan u dhaliyey siddeed gool, lix kalena caawiyey, taasina waxay ka dhigtay laacibka ugu khatarta badan Premier League iyo sidoo kale midka ugu dhaqdhaqaaqa badan ee difaacyahannadu ku dhibtoodaan qabashadiisa iyo goolashiisa sida fudud uu shabaqa u gaadhsiiyo.
Haddii uu horyaalka Premier League iyo Champions League u horseedo kooxda tababare Pep Guardiola, isla markaana qarankiisa England la qaado Nations League badhtamaha sannadka dambe, waxa xaqiiqo ah in 23 jirkan asalkiisu kasoo jeedo Jamaica la siin doono abaal-marinta Ballon d’Or.
44 gool oo dhamaan tartamada uu ud haliyey Liverpool xili ciyaareedkii hore, waxa uu ku kasbaday in kaalinta lixaad ee ciyaartoyga ugu fiican uu soo galo, hal buundo oo kaliyana uu ka dambeeyo Lionel Messi.
Xiddiga reer Masar oo xili ciyaareedkan aan wanaagsanayn, haddana waxa uu illaa hadda dhaliyey sagaal gool oo Reds u horseeday inay laba dhibcood oo kaliya ka dabeeyaan City oo la qaban kari la’yahay. Haddii uu Salah bandhig wanaagsan sameeyo, kooxdiisa Liverpoolna hal tallaabo ka sarreysiiyo halkii uu xili ciyaareedkii hore gaadhsiiyey ee finalka Champions League oo uu koobka u qaado, sidoo kalena City kaga hormaraan Premier League, waxa uu noqon doonaa ciyaartoygii labaad ee kasoo jeeda qaaradda Afrika ee xiddiga Adduunka ee abaal-marinta Ballon d’Or ku guuleysta, waxaana uu ku biiri doonaa liiska uu kalida ku yahay George Weah oo ah madaxweynaha hadda ee Liberia.
Tayadiisa iyo dedaalkiisu waxay sababeen in iyadoo da’diisu sii weynaanayso uu u ciyaaro sida da’yarta, kartida iyo halgankiisuna ay ahaadaan kuwo aan xattaa la saadaalin karin waqtiga ay da’du ka daba iman doonto.
Barcelona ayaa hoggaanka LaLiga haysa, qaybta ugu weyna isaga ayaa ku lahaa, waxaase hubaal ah in xili ciyaareedkii hore uu shaqsiga labaad ka ahaa dhamaan guulihii faraha badnaa ee Barca gaadhay, waxaana kaga horreeyey Lionel Messi oo kaliya.
Haddii xili ciyaareedkan socda uu u guuleysto Champions League, LaLiga iyo tartanka Copa America ee lagu qaban doono Brazil badhtamaha sannadka dambe, waxa uu u tartami karaa abaal-marinta Ballon d’Or.